DEG DEG: Xasan Sheekh Maxamuud oo Ku Horeeya Tirinta Codadka Wareega Ugu Dambeeya ee Doorashada Madaxtinimada Soomaaliya | RBC Radio	Home
Saturday, September 8th, 2012 at 12:13 am	/ 1 Comment Monday, September 10th, 2012 at 08:34 pm DEG DEG: Xasan Sheekh Maxamuud oo Ku Horeeya Tirinta Codadka Wareega Ugu Dambeeya ee Doorashada Madaxtinimada Soomaaliya
Muqdisho (RBC) Musharaxa tartanka madaxweynaha Dawlada Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn ugu horeeya tartanka madaxtinimada dalka wareega saddexaad ee doorashada oo hadda socota.
Waxaa hadda bilaabatay tirinta codadka wareega saddexaad lagu kala bixi doono cod hal dheeri ah.
In ka badan 100 cod ayaa hadda la tiriyey waxaana in ka badan 70 cod ku hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud oo u muuqda inuu yahay musharaxa ku guuleysan doona madaxtinimada dalka afarta sano ee soo socota.
Weli natiijada rasmiga ah laguma dhawaaqin hase yeeshee waxaa tirinta codadka iyo dareenka baarlamaanka dhexdiisa ka jira ayaa ah mid isbedeldoon ah kadib markii musharixiintii hore ay soo jeediyeen in la taageero Xasan Sheekh Maxamuud.
Goordhow la soco natiijada oo dhan.
Tags: Xasan Sheekh Maxamuud	Leave a Reply